Uyikhetha njani iNgcali yeNtengiso ye-imeyile
Imigaqo ekhokelayo ekuqeshweni kweNgcali yeNtengiso ye-imeyile
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 29, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UScott Hardigree
Kwinxalenye yokuqala (Unokufuna iNgcali yeNtengiso ye-imeyile ukuba…Sixoxe ngokuba kutheni kwaye kutheni ingangumbono olungileyo ukwenza isivumelwano kunye neengcali ezinamava, azinikeleyo kunye namava okuthengisa nge-imeyile. Ngoku siza kuchaza imigaqo-sikhokelo ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuqesha iarhente yentengiso ye-imeyile, Umcebisi wentengiso nge-imeyile okanye umphathi wentengiso we-imeyile. Ngoba?
Rhoqo iinkampani zenza ukhetho lwazo ngokusekwe kwiindlela ezingalunganga, ezibangela iintliziyo, ukungasebenzi kakuhle, kunye nenani elibalulekileyo lemveliso elahlekileyo kunye needola.
Izinto ezintlanu Ongafanele Uzenze
Sukucutha ukukhangela ngokwendawo. Ewe eyona ndlela iluncedo yokwakha ukuthembana kukunxulumana ubuso ngobuso, kodwa oko akuthethi ukuba ukuthembana akunakwakhiwa kumanxweme ahlukeneyo okanye kumazwekazi kuloo nto. Gcina ukhumbula ukuba le nto uyikhangelayo ilungile. Ukuthintela ukukhangela kwakho kwasekuqaleni ukuya kwindawo echaziweyo kukhawulela ngokungeyomfuneko. Ngohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kunye ne-ROI esemngciphekweni, izibonda ziphezulu nje. Ngalo mhla we-imeyile kunye neWebEx, unxibelelwano kulula kwaye kwangoko. Ngapha koko, xa sidibana buqu nabaxumi bethu (nokuba bafuna iinkonzo ezithile okanye iinkonzo ezilawulwa ngokupheleleyo), iintlanganiso zihlala zigxile kwaye zisebenza kakuhle kuba sizicwangcisile kwangaphambili kwaye nexesha lilinganiselwe.
Sukukrola abaqeqeshi ngokusekwe kubungakanani. Ukuba uyinkampani encinci, akufuneki usebenze ngaphandle kokuqasha umpu ngenxa yokuba zibonelela ngeenkonzo ezininzi kwaye zinamava ngakumbi kunokuba ufuna; Ngokuqinisekileyo, awunakuba liziko elikhulu lenzuzo kubo kodwa mhlawumbi banobuchwephesha obuchanekileyo obufunayo.
Ngokufanayo, abathengi abakhulu akufuneki bakhuphele ngaphandle iiarhente ezincinci okanye iingcali ezizimeleyo ekuqwalaseleni kwabo. Abantu abanetalente ekuqhubeni iivenkile ezincinci banokuba namava ngakumbi kunolwazi lwentengiso lwe-imeyile lwasekhaya okanye abasebenzi abakumgangatho ophakathi oya kuthi wabelwe kwiarhente enkulu yenkonzo epheleleyo. Kukuqwalaselwa, ubuchule kunye nemibono ebalulekileyo.
Sukwenza amava eshishini abe nawo. Uncedo lokuthengisa olunamava amaninzi odidi kunokuba kuxhomekeke kushishino-cinga. Akukho qela okanye mntu uya kuze azi kangangoko unokwenza malunga nomzi mveliso wakho, ke kuya kufuneka uwaqeshe kwinto abayaziyo: ubugcisa kunye nesayensi yokuthengisa nge-imeyile.
Enye yezinto endizithandayo ngokuba kwintengiso ye-imeyile kukuphambanisa ukungcoliswa kweengcamango ezifumaneke ekusebenzeni kwimizi-mveliso eyahlukeneyo. Onke amashishini ahlukile, kodwa onke abelana ngeempawu ezifanayo. Rhoqo into esiyifundayo sisebenzela abathengi kwishishini elinye ibangela umbono omtsha kumthengi kwenye.
Sukucela (okanye ukonwabisa) umsebenzi wentelekelelo. Imikhankaso ekhethekileyo okanye iimvavanyo zizinto ezine zeshishini le-arhente, kuyafana nange-centric ye-imeyile. Imikhankaso ekhethekileyo ifana ne-steroids, ihlala igqithisa ngaphezulu kwabasasazi? amandla. Kodwa esona sizathu sokuba ungaceli umsebenzi okhethekileyo kukuba awona mathuba alungileyo – awona uwafunayo-awuyi kuyenza. Akunyanzelekanga ukuba. Okukhona bekulungele ukutsiba iihupu zokucingela wena, kokukhona kuya kufuneka ukrokre. Ukuba bakulungele ukunika umsebenzi wabo akufuneki kubekho intengiso entle kakhulu.
Musa ukuyiphepha imibuzo malunga nohlahlo-lwabiwo mali. Musa ukuvumela nabani na ukuba akuxelele ukuba imali (okanye uhlahlo-lwabiwo mali) ayithethi. I-arhente nganye okanye i-outsourcer inezinto ezithile ezincitshisiweyo zohlahlo-lwabiwo mali lwabathengi, ezifikelelwe ngamava kwaye zichazwe ngokuyinxenye kuqoqosho kunye nomthwalo wabo wabathengi wangoku. Kungenxa yoko le nto kubalulekile, ukwenzela ukuqhuba uphononongo olunolwazi, ukuba unoluvo oluthile lokuba ibhajethi yakho yintoni okanye kufanele ukuba yintoni. Mhlawumbi unamava angathandekiyo ngokubhengeza uhlahlo-lwabiwo mali kwangethuba okanye into obucinga ukuba iphandle kakhulu (khumbula iwebhusayithi yakho oyiphuhlisileyo?) Iyenzeka. Kodwa njengomgaqo ngokubanzi, xa uthetha namathemba anomdla, zibandakanyeke kwincoko evulekileyo xa kufikwa kuhlahlo-lwabiwo mali. Ekugqibeleni iya konga ixesha, amandla kunye nemali.
Ke kufuneka ukhethe njani iqabane lokuthengisa nge-imeyile?
Yenza isigqibo ngento oyifunayo. Eyona nto imbi onokuyenza kukuqesha umsebenzi kwaye ungabavumeli ukuba bawenze. Ngaba ufuna umntu oza kukhokela okanye umntu omlandelayo? Ifemi enokukhulisa isicwangciso okanye ingcali ekuphumezeni? Umcebisi othanda ukonwaba okanye lelo lishishini? Umqeshwa ukuthatha ii-odolo okanye umntu oya kuthi acele umngeni kwindlela ocinga ngayo?
Qalisa incoko. Thumela ithemba nge-imeyile, okanye ubatsalele umnxeba. Chitha imizuzu embalwa emnxebeni kunye kwaye niyakufumana kwangoko imichiza kunye nomdla. Babuze malunga nembali yabo, ukuba ngoobani abathengi babo bangoku, zeziphi izakhono zabo ezingundoqo.
Bacele ukuba baphonononge iimeko ezimbalwa zezifundo. Gcina ukhumbula ukuba awujongi ukubona ukuba baneziphumo ezilungileyo zokuxela (bonke baya kuthi) kodwa ukuqonda ukuqonda emva kokuba bafike njani kwizisombululo zabo. Uya kufunda ngenkqubo yabo, ukuba yintoni, isebenza njani, kwaye inokuthi ilunge kangakanani kwinkampani nakwinkcubeko yakho. Ngaba yinkqubo? Ukuphefumlelwa-kusekwe? Ukuqhutywa kwedatha?
Xa ufumana ukulingana okufanelekileyo, xoxa nabo ngeyona ndlela yokuqinisekisa ubudlelwane obude kunye nobuyimpumelelo. Yiza kwisivumelwano esicacileyo kulindelo lwakho kwimbuyekezo kunye neenkonzo. Emva koko dubula umpu wokuqalisa kwaye ubenze basebenze.
tags: ukwakha iqelaWordPress
UScott Hardigree ngu-CEO kwi Uphawu lwentengiso, iarhente yentengiso ye-imeyile epheleleyo kunye nokubonelela ngokusekwe eOrlando, FL.
UScott unokufikelela ku-scott@indiemark.com.
Injini yokuKhangela yokuSebenzisa